Wargeysyada Ingariiska Iyo Wararkii Ay Ka Qoreen Suuqa Kala Iibsiga | Wakaaladda Wararka Hiilnews
Wargeysyada Ingariiska Iyo Wararkii Ay Ka Qoreen Suuqa Kala Iibsiga
Axad, September,3 2017 (HNN ) Inkastoo suuqa kala iibsiga xagaaga uu si rasmi ah u soo xirmay oo ay ugu danbeysay Jimcihii oo uu soo xirmay suuqa kala iibsiga Spain, xanta suuqa ma ahan mid joogsata waxaana durbaba la isku diyaarinayaa suuqa kala iibsiga bisha Janaayo sida kooxaha ay u doonayaan inay u dhameystiraan heshiisyadii ay ku hungoobeen xagaagan ama ay xitaa ula soo wareegaan bartilmaameedyo cusub.
Wargeysyada Ingariiska ayaana ah kuwa had iyo jeer ka hadla wararka la xiriira suuqa kala iibsiga, waxaana idiin soo gudbineynaa maanta wararkii ay suuqa kala qoreen oo kooban.
Real Madrid ayaa iska diiday fursad ay kula wareegto xiddiga Arsenal Alexis Sanchez suuqii kala iibsiga xagaaga laakiin waxa ay u soo laaban karaa xagaaga danbe marka uu xor noqdo.
Diego Costa iyo Chelsea ayaa maxkamad sial kori kara. Kooxda heysata horyaalka Premier League ayaa la fahamsan yahay inay ka fiirsaneyso inay ku dacweyso weeraryahanka falaagada ah inuu kooxda siiyo 50 milyan ginni haddii uu sii diido inuu ku soo laabto kooxda.
Tababaraha Newcastle Rafa Benitez ayaa lala xiriiriyay inuu noqonayo tababaraha xiga ee West Ham, inkastoo ay kooxda siisay tababare Slaven Bilic muddo bil ah uu ku badbaadsado shaqadiisa.
Saxiixa cusub ee Chelsea Kylian Hazard ayaa ka gacan ka geysan kara in walaalkiis ka weyn kana magaca dheer Eden Hazard inuu ka dhaadhiciyo inuu qandaraas cusub u saxiixo Blues.
Ugu yaraan labo xiddig oo ka mid ah Manchester United ayaa waxaa baareysa HMRC taasoo la xiriirta inay qiyaameeyeen canshuurtii lacagaha xayaysiinta ka soo gashay, iyadoo waaxda canshuuraha Ingariiska ay fureyso kiisas cusub oo ka dhan ah ciyaartoyda Premier League.
Kooxda Atletico Madrid ayaa kalsooni ku qabta inay dhameystiri doonta heshiiska Diego Costa bisha soo socota, laakiin waxa ay kooxda reer Spain ku dhiirogelineysaa weeraryahanka inuu la heshiiyo Chelsea oo uu gacan ka geysto heshiiska labada kooxood.
Safarkii qarsoonaa ee uu xiddiga Leicester City Riyad Mahrez kaga soo tagay xulka qaranka dalkiisa Algeria maalintii ugu danbeysay ee suuqa kala iibsiga ayaa lagu sheegay inuu mid uu ku doonayay inuu ugu biiro Manchester United.
Tababaraha Liverpool Jurgen Klopp ayaa wadahadalo la yeelan doona Philippe Coutinho isbuuca danbe ka dib markii uu xiddiga reer Brazil ku hungoobay riyadiisii aheyd inuu u wareego Barcelona suqii kala iibsiga xagaaga.
Xiddiga khadka dhexe ee Arsenal Jack Wilshere ayaa iska diiday inuu maalintii ugu danbeysay ee suuqa kala iibsiga u wareego kooxda Birmingham, inkastoo loo soo bandhigay mushahar uu 90 kun ginni ku qaadanayo isbuucii.
Agaasimaha isboortiga kooxda Sporting Lisbon ayaa weerar culus ku qaaday milkilaha West Ham David Sullivan isagoo ku tilmaamay inuu yahay beenaale iyo cayayaan madaama uu sheegay in William Carvalho oo loo soo bandhigay kooxda Premier League ka dhisan maalintii ugu danbeysay suuqa kala iibsiga.
Tababaraha kooxda Crystal Palace Frank de Boer ayaa wajahaya in la ceyriyo ka dib seddex guuldarro oo isku xigta oo soo gaartay, waxaana shaqadiisa durbaba lala xiriirinayaa Roy Hodgson.